Real Time Gaming eku inthanethi eNingizimu Afrika
Ikhaya / Abahlinzeki begeyimu / amakhasino e-real time gaming ningizimu afrika
Amakhasino e-Real Time Gaming Ningizimu Afrika
Amakhasino e-RTG ayizinkampane zemidlalo ezisebenza ipulatifomu yesofthiwe ye-Real Time Gaming edawunilodekayo kanye nedlala ngokushesha ezinikezela ngohlu oluphelele lwemidlalo yasekhasino. Ngedumela elihle kakhulu lokusetshenziswa kwezici ezintsha nesipiliyoni sokudlala esibushelelezi, i-Real Time Gaming ibhekwa njengomunye wabahlinzeki besofthiwe abavelele kule mboni. Ukwaziwa ngobuningi bemishini yama-slot eletha ama-jackpot angahleliwe, i-Real Time Gaming iphinde inikeze inqwaba yeminye imidlalo yasekhasino, njenge-Poker, i-Blackjack, i-Roulette, i-Craps, i-Keno neminye.
Amakhasino e-RTG ayatholakala kubadlali baseNingizimu Afrika futhi senze uhlu lwamakhasino e-inthanethi ahamba phambili asebenzisa isofthiwe ye-RTG lapho abadlali bangabheja khona nge-ZAR ngaphandle kwesidingo sokushinstha imali kwezinye izinhlobo zemali. Khetha indawo yokudlala evumelana nalokho okuthandayo kakhulu futhi ujabulele ukubhalisa noma amabhonasi ediphozithi engekho endaweni yokudlala ephephile.
Zama La Makhasino e-Inthanethi e-Real Time Gaming (RTG)
Imidlalo ye-Real Time Gaming
Isungulwe kudala ngonyaka we-1998 kwenye yezindawo eziyintandokazi zabagembuli baseMelika, e-Atlanta, Georgia, i-Real Time Gaming inikezela ngemidlalo eminingi yasekhasino kubandakanya i-Blackjack, i-Baccarat, i-Craps, i-Roulette nezinhlobo ze-poker yevidiyo. Ukunikeza abadlali isipiliyoni sekhasino yangempela, imidlalo ye-RTG ingadlalwa kuhlelo oludawunilodekayo noma kumapulatifomu e-Flash futhi imidlalo eminingi yasekhasino itholakala kumaselula. Kulabo badlali abazinikele ku-Blackjack, i-RTG inikeza izinhlobo eziningi ze-Blackjack kubandakanya i-Double Exposure ne-Perfect Pairs. Uhlu lwemidlalo ye-Poker Yevidiyo luyisigaba sesibili esikhulu semidlalo ye-RTG emuva kwemishini yama-slot eminingi. Ungakhetha emidlalweni ehlukahlukene ye-poker yevidiyo kubandakanya imidlalo eminingana eyibhansela ye-poker yevidiyo.
I-RTG iphinde inikeze izinhlobo ezimbili ze-roulette, inguqulo yaseYurophu neyaseMelika yomdlalo. Imidlalo yetafula ingabhejwa kusukela ku-R5 kuya-R500, ngakho-ke zonke izinhlobo zabadlali bamageyimu zingakwazi ukuyikhokhela. Iklanylwe futhi yakhiwe ngendlela efana nemishini yama-slot futhi inikela ngamaphesenti aphezulu okukhokha, ifinyelela ku-98% kweminye imishini ye-poker yevidiyo. Imidlalo ye-RTG yetafula neye-poker kufanele idlalwe uma ufuna isipiliyoni sokudlala esijwayelekile futhi esinomvuzo. Ngokuqondene nokusebenza kwemidlalo, singasho ukuthi imidlalo yasekhasino evela ku-Real Time Gaming inikela ngokudlala okujabulisayo nokushelelayo. Ngaphandle kwalokho, le midlalo iqinisekiswe ngabacwaningi mabhuku abazimele. Kodwa-ke, kusobala ukuthi ukugxila konjiniyela wesofthiwe kubekwe emishinini yama-slot, ezochazwa esahlukweni esilandelayo, kanti, ngakolunye uhlangothi, eminye imidlalo yasekhasino ayinakho okusha.
Ama-Slot Nezizumbulu Zemali Ekhula Njalo (Progressive Jackpots) e-Real–Time Gaming
Isiqubulo senkampane ye-Real-Time Gaming sithi “sithatha ukudlala ngokungathi sina” futhi incazelo yaso ingaqondwa kalula uma uvula uhlu lwemishini yokugebula yabo. Njengoba idume ngokukhipha imidlalo emisha njalo, i-RTG inikela ngemidlalo engaphezulu kwekhulu ebandakanya imishini yakudala yokugembula neyamavidiyo kanye nama-jackpot akhula njalo. I-RTG idume phakathi kwabadlali ngokuba namabhonasi ediphozithi engekho kaningi nemiqhudelwano yama-freeroll ekunikeza ithuba lokuncintisana nabanye abadlali uthola ingxenye yakho yeqoqo lomklomelo.
Izici zebhonasi ezahlukahlukene ziyisizathu esenza ukuthi abadlali bathande ukudlala imishini ye-RTG, futhi imidlalo yama-slot ye-Real Series ivelele esixukwini ngezici ezinenzuzo ezinjengama-spin amahhala, izikrini ezithintekayo, isici Sokuzikhethela (Pick and Choose), noma ama-multiplier ayimfihlakalo. Imidlalo ye-RTG ibuye ibe nemidwebo emihle nezithombe ezibushelelezi ezinendikimba yemidlalo enezihloko ezahlukahlukene, kusuka endalweni nasekujuleni kolwandle kuye kwezomlando. Ezinye zalezi zihloko ezithandwa kakhulu zibanadakanya i-Aztec’s Treasure, i-Ocean Oddities, i-Jumping Beans, i-Mystic Dragon nezinye.
Esinye sezici ezikhanga kakhulu zemishini yokugembula (slot) ye-RTG yi-Jackpot Ekhula Njalo Engahleliwe (Random Progressive Jackpot) ekunikeza ithuba lokuwina i-jackpot nganoma yisiphi isikhathi somdlalo ngaphandle kwesidingo sokufolisa izimpawu ezifanayo kuwo wonke ama-reel. Ngaphandle kwama-slot evidiyo akunikeza ama-jackpot akhula njalo ajwayelekile atholakala ngezikhathi ezingahleliwe, ama-progressive slot e-RTG anenethiwekhi ye-jackpot ekhula njalo njenge-Aztec’s Millions, i-Megasaur ne-Jackpot Piñatas akhokhela kakhulu. Kodwa-ke, ama-progressive slot e-RTG awathandwa njengama-progressive jackpot enethiwekhi avela kwezinye izinkampane zamageyimu, njengoba ama-jackpot azo enyuka kancane futhi awavamile ukunqotshwa. Ukudlala ama-progressive slot kudinga ukubheja inani elithile elibiza kakhulu kubadlali abaningi, ngakho-ke ungase unamathele kuma-progressive jackpot akuma-slot evidiyo. Kwezinye izikhathi, umdlalo unikela ngama-progressive jackpot amabili, enkulu nencane, okwenza le midlalo ikufanele ukuzanywa.
Izindlela Zokukhokha e-Real–Time Gaming
Izindawo zokudlala imidlalo ku-inthanethi ezisebenzisa isofthiwe ye-RTG zinikela ngezindlela eziningi zokwenza izinkokhelo ongazikhetha futhi, okubaluleke kakhudlwana, abagembuli baseNingizimu Afrika bangadiphozitha futhi bakhiphe izinkokhelo zabo nge-ZAR okuyinto enhle esikhathini nasesikhwameni sakho, njengoba singekho isidingo ukushintsha imali yakho kwezinye izimali. Lokho kusho ukuthi awudingi ukukhokha imali eyengeziwe yokushintsha imali.
Izindlela zokukhokha ezitholakalayo ezamukelwa amakhasino e-inthanethi asebenza isofthiwe ye-RTG zibandakanya Amakhadi Esikweleti Namakhadi e-Debit afana ne-Visa ne-MasterCard, Ukudlulisa Imali Ngebhange (Bank Wire Tranfers) noma ama-e-wallet afana ne-EcoPayz, i-Skrill ne-Neteller. Imvamisa, ama-e-wallet ayindlela elula kunazo zonke uma kuziwa ekudlaleni ku-inthanethi njengoba unngadiphozitha imali futhi ukhiphe okuwinile mahhala nangesikhathi esamukelekayo. Ukukhipha imali ngama-ewallets ngokuvamile kungathatha amahora angu-48.
Kungani Udlale Emakhasino e-Real Time Gaming?
Esinye sezici ezinhle kakhulu zamakhasino asebenzisa i-RTG wuhlu olude lwemidlalo, ikakhulukazi ama-slot, anezihloko ezifika ku-300. Ngaphandle kwalokho, wonke ama-slot ayo anikela ngama-jackpot angahleliwe aqala ku-R10,000 angawinwa ngokudlala noma yiliphi inani nge-spin ngayinye. Wonke amakhasino e-RTG ayatholakala ngamadivayisi ahlukahlukene njengama-PC, ama-laptops, ama-smartphone noma ama-tablet, kodwa kufanele wazi ukuthi akuzona zonke izihloko ezitholakalayo kuwo wonke amapulatifomu nokuthi into engcono kakhulu ukudlala ikhasino engadawunilodwa enikeza uhlu oluphelele lwemidlalo.